Waa maxay xumbo badded ? | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Waa maxay xumbo badded ?
SONNA (MUQDISHO)- Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Kaluumeysiga iyo Khayraadka Badda Maxamuud Sheekh Cabdullaahi oo Sonna la hadlay ayaa sheegay in Xumbo badeedka ay keento isbeddalka Cimilada iyo Saliidda ay iska baddalaan doomaha ee ay ku shubaan badda. Sidoo kale Qashinka ayuu sheegay in uu sababo taa oo ugu danbeyn dhalisa in baddu ay soo tufto Xumbo wasaqeysan oo khatar caafimaad leh.
Waa maxay Xunbada ay badda Muqdisho soo Tuftay?
Hadii aad koob dhalo ah ku shubto biyaha badda kadibna aad ruxdo waxad arkaysa xumbo iyo boodbodka biyaha, sababtuna waa in ay biyaha baddu yihiin curiyayaal iyo madooyin is ku tagay.
Waxa ay xumbo baddedu abuuranta marka ” dissolved Organic matter in the ocean churned up. Marka organic matter ( waxa ka mid ah curiyashan carbohydrates, lipids, proteins and nucleic acid ) kuwas oo saaid iskugu qasmay sababta oo ah hirarka badda ayaa xoog u kacsan. ( The sea was churned up by heavy winds) .
Xayaabo baddeda ( algae blooms) ayaa ah kan ugu samayta xun kadib marka organic matter badan oo xayaabo badddu ka qariso oxygen ka waxa ka dhex abuurma xumbo kadibna furka tuurata ilaa xeebta.
samayska ka xunbadu way ku kala duwanyihiin badduhu. Waxa run ah in aysan sun ahayn ama dhib u gaysan karin aadamaha marka laga reebo xumbo uu abuuray xayaabo baddeda sunta ah kaas oo sababi karta dadka ” Asmada iyo foodho xanunka qaba ay dhib u gaysato.” Badana waaba lodabal iyo damashaad taga.
Meelaha ugu badan ee xumbaddan lagu arko waa ” Pacific Ocean ” Ka. Kan ugu danbeyey wuxu ah kii San Francisco ugu badna ee ka dhaca. Dabecadaha badda ayaa ah in qofka aan u kuurgalin uu ku argagaxo amase mucjiso u arko.
Previous articleMadaxweyne Lafta Gareen oo la kulmay Safiirada Ingiriiska iyo Mareykanka
Next articleQof Shacab ah oo ku dhintay Qarax Miino oo Xagjirka Al-shabaab ay ka geysteen Wadada Ex-contarol Afgooye.